Read more about EU Drawing Competition for Youth in ASEAN: Our Planet, Our Future
Read more about DEADLINE EXTENDED: public consultation on the EU’s Generalised Scheme of Preferences
။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ပေါကြွယ်ဝဆုံးသော နိုင်ငံများအနက် တစ်နိုင်ငံဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသည် သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းမှု၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား တရားမဝင်သတ်ဖြတ်မှုများ၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများ စသည်တို့ကြောင့် စိန်ခေါ်မှုအများအပြားနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည်။ အရေးတကြီးဖြေရှင်းရန် လိုအပ်လာသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် မြန်မာ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို ကာကွယ်ရန်မှာ အရေးကြီးလှကြောင်း လူထုအား အသိပေး လှုံ့ဆော်ရန် ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာ့မြင်မှုဆိုင်ရာအနုပညာရှင်များ (visual artists)၊ ထင်ပေါ် ကျော်ကြားသူများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ (eco-champions) ၏ ဖန်တီးမှုအနုပညာ လက်ရာများပါဝင်သော “ဒို့ကမ္ဘာ” အမည်ရ မာတီမီဒီယာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြပွဲကို ၆ ပတ်ကြာ ကျင်းပပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
"During this period, my factory was closed and I had no income. So, I worked in farming but it does not cover my family needs. Meanwhile, this Myan Ku support can solve my family’s basic needs.”
Eaindra Htet, garment worker
“ဒီလိုအချိန်ကာလအတွင်းမှာ၊ ကျွန်မစက်ရုံကလည်း ပိတ်ထားပြီး ကျွန်မမှာလည်း ဝင်ငွေမရှိပါဘူး။
အဲဒီ့အတွက် ကျွန်မ လယ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒါက ကျွန်မ မိသားစုလိုအပ်ချက်ကို
မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုအချိန်အတောအတွင်းမှာ၊ ဒီ မြန်ကူ ထောက်ပံ့မှုက ကျွန်မမိသားစုရဲ့
အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု မအိန္ဒြာထက် က ပြောပြခဲ့သည်။